QM oo gargaar dhaqaale oo dhan $4.5 milyan ugu deegday dadka ay abaaruhu saameeyeen ee Puntland. – Radio Daljir
Garowe, Feb 02 – Wefti ay hogaaminayso Baroness Valerie Amos, ku xigeenka xoghayaha guud ee QM ee u qaabilsan arrimaha bini’aadamnimada caalamka ayaa safar hawleed ku timid Puntland. Baroness Amos ayaa kulamo wadatashi ah la yeelatay madaxda dawlada Puntland oo uu ka mid yahay M/weyne C/raxmaan Maxamed Faroole iyo xubno ka tirsan golayaasha iyo hay’adaha dawlada.
M/weyne Faroole oo ka hadlay kulanka ay la yeesheen waftiga Baroness Amos ayaa uga mahadceliyey booqashada, kaalmada ay QM u fidiso barakacayaasha ku sugan Puntland, iyo gargaarka deg deg ah ee dadka ay abaaruhu saameeyeen.
Baroness Amos oo iyana la hadashay saxaafada ayaa sheegtay in ahmiyada u weyn ee safarkeedu uu yahay mid la xiriira daryeelka dadka barakacayasha ah ee ku nool Puntland, iyo gargaar deg deg ah oo la gaarsiiyo xoola-dhaqatada ay abaaruhu saameeyeen.
Baroness Amos waxaa ay sheegtay in ay kala hadashay madaxda Puntland daryeelka iyo sare u qaadida nololeed ee dadka barakacayaasha ah ee ku sugan Puntland, iyo sidii loo balaarin lahaa adeegyada bulsheed ee aasaasiga ah sida biyaha iyo saxada ee xeryaha ay ku nool yihiin barakacayaashu.
Waxaa kale oo ay sheegtay in ay isla garteen dawlada Puntland in laga raro barakacayaasha xeryaha dadku ay ku badan yihiin, loona raro xeryo kale oo u sahla in ay ku helaan nolol dhaanta tan ay iminka ku sugan yihiin, isla markaana u sahasha hay’adaha samafalku in ay u gudbiyaan adeegyada bulsheed ee aasaasiga ah.
Waxaa kale oo ay sheegtay in gargaar deg deg loo fidin doono dadka ay abaaruhu saameeyeen, QM-na ay mashruucaas u qoondaysay dhaqaale dhan afar milyan iyo badh (4.5m) oo doolar.
Gargaarka ayaa ay Baroness Amos sheegtay in uu u qaybsan yahay laba dhinac:
i) biya dhaamis & daryeel saxo, iyo
ii) gargaar dhaqaale iyo nololeed oo ku wajahan dhinaca beeralayda.
Baroness Amos waxaa ay sheegtay in ay madaxda Puntland ay ka wada hadleen amniga guud ee Somaliya, iyo raadka ay ku yeelan karto gobollada Puntland.
Baroness Amos waxaa safarkeeda ku weheliyey Mark Bowden, u qaybsanaha arrimaha bini’aadamka, ahna xiriiriyaha hay’adaha QM, iyo madax kale oo ka tirsan hay’adaha samafalka ee ka hawlgala Somaliya.